Pregnant Mom & Thingyan - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Pregnant Mom & Thingyan
သင်ျကွနျကလညျးနီးလာပွီဆိုတော့ ခုကိုယျဝနျဆောငျနတေဲ့ မဗိုကျတို့ရော ဘယျလိုအစီအစဉျတှဆှေဲထားကွပွီးပီလဲ?
မဗိုကျတဈခြို့ကလညျး ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျ သင်ျကွနျလညျဖို့မှ
ကိုယျဝနျ၃၄ပတျကြျော ၈လကြျောလောကျဆိုရငျတော့ သင်ျကွနျမလညျသငျ့တှောပါဘူး။
မဗိုကျတို့ဟာအခြိနျမရှေး ဗိုကျနာနိုငျ မှေးဖှားနိုငျတာမို့ လမျးကွပျတဲ့လမျးပိတျတဲ့ သင်ျကွနျလညျတာမြိုးတော့ မလုပျသငျ့တော့ပါဘူးလို့ပွောပါရစေ။
ဒါဆို ကိုယျဝနျရှိစက ၈လအထိရောဆိုရငျတော့?
ရဆေငျး၊ သှေးဆငျးတာမြိုးမရှိဘူး။ ကိုယျဝနျဆိပျတကျတာမြိုးမရှိဘူးဆိုရငျတော့လညျလို့ရပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ မခုနျပေါကျမိဖို့၊ ဗိုကျကို ထိခိုကျခွငျး၊ ခြျောလဲခွငျးမရှိစဖေို့သတိထားပါ။
_ စလညျထဲက လုံလုံခွုံခွုံအအေးမပတျအောငျဝတျသှားပါ။
မိုးကာ၊ သဘကျတို့ဆောငျသှားပါ။ အရမျးစိုလာရငျလဲဖို့အကြီင်္ယူသှားပါ။
_ ရသေနျ့ဘူး သို့ ဓာတျဆားဘူးဆောငျသှားပါ။
သိကွတဲ့အတိုငျး သင်ျကွနျဟာ နှနေပေူတဲ့အခြိနျဖွဈတာကွောငျ့ ရဓောတျခမျးခွောကျတာမဖွဈရအောငျ ရဘေူးဆောငျပွီး ရဆောတိုငျးသောကျပေးပါ။
သင်ျကွနျတှငျး အစားအစာတှပေေါတယျဆိုပမေယျ့ မဗိုကျတို့ဟာ တှရေ့ာစားဖို့မသငျ့တျောပါဘူး။ ဝမျးပကျြမယျ။ ပိုးဝငျမယျဆို မိမိရောကလေးပါ
ထိခိုကျနိုငျတာမို့ အိမျထဲက သနျ့ရှငျးတဲဘအစားအစာ ကွိုစီစဉျသှားပါ။
သင်ျကွနျတှငျးရစေိုခံ ကွိုးသိုငျးဖိနပျအပါးမြိုးက အသငျ့တျောဆုံးဖွဈနိုငျ
ပါတယျ။ မလညျခငျထဲကကွို စီးထားပါ။ လညျတဲ့နမှေ့ စီးသှားရငျ ဖိနပျပေါကျတာမြိုးဖွဈနိုငျလို့ပါ။
ခြျောမလဲစရေနျ အဖျောတယောကျဘေးမှာ အမွဲရှိနပေါစေ။
ဒါဆို သင်ျကွနျလညျမယျ့ မဗိုကျတှေ အတှကျ
သင်္ကြန်ကလည်းနီးလာပြီဆိုတော့ ခုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတဲ့ မဗိုက်တို့ရော ဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေဆွဲထားကြပြီးပီလဲ?
မဗိုက်တစ်ချို့ကလည်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် သင်္ကြန်လည်ဖို့မှ
ကိုယ်ဝန်၃၄ပတ်ကျော် ၈လကျော်လောက်ဆိုရင်တော့ သင်္ကြန်မလည်သင့်တွောပါဘူး။
မဗိုက်တို့ဟာအချိန်မရွေး ဗိုက်နာနိုင် မွေးဖွားနိုင်တာမို့ လမ်းကြပ်တဲ့လမ်းပိတ်တဲ့ သင်္ကြန်လည်တာမျိုးတော့ မလုပ်သင့်တော့ပါဘူးလို့ပြောပါရစေ။
ဒါဆို ကိုယ်ဝန်ရှိစက ၈လအထိရောဆိုရင်တော့?
ရေဆင်း၊ သွေးဆင်းတာမျိုးမရှိဘူး။ ကိုယ်ဝန်ဆိပ်တက်တာမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်တော့လည်လို့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မခုန်ပေါက်မိဖို့၊ ဗိုက်ကို ထိခိုက်ခြင်း၊ ချော်လဲခြင်းမရှိစေဖို့သတိထားပါ။
_ စလည်ထဲက လုံလုံခြုံခြုံအအေးမပတ်အောင်ဝတ်သွားပါ။
မိုးကာ၊ သဘက်တို့ဆောင်သွားပါ။ အရမ်းစိုလာရင်လဲဖို့အကျီင်္ယူသွားပါ။
_ ရေသန့်ဘူး သို့ ဓာတ်ဆားဘူးဆောင်သွားပါ။
သိကြတဲ့အတိုင်း သင်္ကြန်ဟာ နွေနေပူတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့် ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်တာမဖြစ်ရအောင် ရေဘူးဆောင်ပြီး ရေဆာတိုင်းသောက်ပေးပါ။
သင်္ကြန်တွင်း အစားအစာတွေပေါတယ်ဆိုပေမယ့် မဗိုက်တို့ဟာ တွေ့ရာစားဖို့မသင့်တော်ပါဘူး။ ဝမ်းပျက်မယ်။ ပိုးဝင်မယ်ဆို မိမိရောကလေးပါ
ထိခိုက်နိုင်တာမို့ အိမ်ထဲက သန့်ရှင်းတဲဘအစားအစာ ကြိုစီစဉ်သွားပါ။
သင်္ကြန်တွင်းရေစိုခံ ကြိုးသိုင်းဖိနပ်အပါးမျိုးက အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်နိုင်
ပါတယ်။ မလည်ခင်ထဲကကြို စီးထားပါ။ လည်တဲ့နေ့မှ စီးသွားရင် ဖိနပ်ပေါက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်လို့ပါ။
ချော်မလဲစေရန် အဖော်တယောက်ဘေးမှာ အမြဲရှိနေပါစေ။
ဒါဆို သင်္ကြန်လည်မယ့် မဗိုက်တွေ အတွက်
How to take care of your children during Thingyan